Ny lantonoara Hacks Live Event - Lantonoara Of The Day
Sary an-tsaina ny mahery vaika indrindra fanangonana ny fahalalana ianao ho afaka hahita amin'ny efitrano iray.
Izany no mahazo anao rehefa mandeha any ny lantonoara Hacks Live fivoriambe.
Eo amin'ny timespan ny 3 andro, 17 ny endrika fantatra indrindra tao amin'ny lantonoara mahazo raharaham-barotra miaraka amin'ny 3,000 lehilahy sy ny vehivavy izay te-hianatra ny zava-miafina ara-barotra.
Ny zava-nitranga in 2018 dia tanteraka mpandika rakitsoratra izay nivarotra ny mpanatrika tao amin'ny resaka segondra.
Ary avy tamin'ny 52,000 lantonoara mavitrika mpampiasa maneran-tany, ampahany kely fotsiny tonga handray ny tena matihanina.
Raha tsy te-ho tavela avy, ho eo an-handrandraiko ho an'ny taona manaraka ny hetsika.
Izany dia midika hoe ho efa nanambara!